Wasaarada Isgaadhsiinta Somaliland Oo Daah Furtay Hab Casriya oo si fudud ugu-wada xidhidhi karaanWasaaradaha Dawladda | Somaliland Post
Home News Wasaarada Isgaadhsiinta Somaliland Oo Daah Furtay Hab Casriya oo si fudud ugu-wada...
Wasaarada Isgaadhsiinta Somaliland Oo Daah Furtay Hab Casriya oo si fudud ugu-wada xidhidhi karaanWasaaradaha Dawladda
Hargaysa(Slpost.nte)Wasaarada boosaha iyo isgaadhsiinta Somaliland ayaa maanta soo bandhigtay mashruuca loogu tallo galay in lagu xidhiidhiyo wasaaraadaha dawlada iyo Kuwa Caalanka oo ay Maal-Galinayaan Baanka Aduunka Oo Faa’ido badan ugu fadhida Somaliland.
Wasiirka Boosaha Somaliland Maxamuud Sheekh Cabdilaahi Cige ayaa maanta Daah Furay Mashruucani waxaana uu kulamo layeeshay masuuliyiinta shirkadaha bixiyay adeega intenaydka oo tartan Loo qabanayo sidii ay u bixin lahaayeen internayd xawaarihiisu sareeyo kaas oo ay iyagana bixinayaanMashruucan Ayaa ugu horayn waxa lagu Tijaabi Doonaa Wasaaradaha Boosaha,madaxtooyada,maaliyada iyo Ganacsiga,taas oo loogu tallo galay In Maqal iyo muuqaal kula xidhiidhaan Wasaaradaha caalamka oo ah hab casri ah.
Agaasimaha Guud ee wasaarada Boosaha iyo Isgaadhsiinta somaliland Faysal Cali sheikh ayaa si qoto dheer muhiimada uu leeyahay mashruucani daaha ka rogay waxaana uu ka shekeeyay faa’iddooyinka ku duugan ee keenay in baahi loo qabo mashruucani bidhka ah.
“Runtii Maanta Farxad ayay Nootahay Inaad nagala soo qayb gashaan munaasibadan oo ku saabsan furitaanka Bidh ama tartan ay shirkaduhu u gali doonaan afar xafiis Oo Xidhiidhka Xafiisyada ah Taas oo qala-bayntiisa iyo internaydkiisaba si buuxda loogu xidho doono,runtiina tartankaas waxa hagi doonta wasaarada boosta iyo isgaadhsiinta Somaliland,waxaana laga maal galinayaa Baniga Aduunka.
Agaasimaha Wasaarada boosta iyo is gaadhsiinta Somaliland ayaa ka hadlay mashruucan ay bixinayso Bangiga aduunku,waxaana uu ka shekeeyay faa’idada ku duugan iyo adeegyada uu ka koobnaan doono waxaana uu yidhi.
“Mashruucani waxa uu ka koobnaan doonaa qalab lagu xidhi doono wasaaradaha dawlada,waxaana ay qalabkani kuwada xidhiidhi doona wasaaradaha dalka,waxana ku xidhnaan doona oo iyaguna ku jira interned Toban Embii Ah oo sanad iyo sideed bilood labixin doona Lacagtiisa,mashruucani runtii waa bilow waxaanan rajaynaynaa inuu sii socdo oo qaybaha dhiman ama wasaaradaha dhiman inuu dhamaystirmo inta naga dhiman.
Faysal Cali sheikh ayaa geesta kale sheegay in shirkadaha ku tartamaya loogu garsoori doono si cadaaladi ku dheehan tahay,waxaana uu tilmaamay in mashruucan cidii ka soo bixi karta loo dhiibi doono.
“Waxaanu wasaarada ahaan ku dadaali doonaa tan iyo hawlaha kale ee aan wadnana in ay noqdaan qaar qaranka wax badan u tara inta oo kaliya wasaarady shaqadeeda maaha ee kuwan iyo kuwa kaleba way laleedahay ha noqdaan shirkadaha is gaadhsiinta ama boosta,waxaana ay diyaar u tahay in ay kala shaqayso dadaal dheerna ugu jirto sidii ay u kobcin lahayd isgaadhsiinta dalka Somaliland.
ku xigeenka wasaarada boosaha iyo is gaadhsiinta iyo Guddoomiyaha ICT Ee wasaarada boosaha iyo isgaadhsiinta Somaliland Eg Cali Daahir ayaa isna sheegay inuu mashruucani faa’ido badan u leeyahay wasaarada dawlada iyo xidhiidhkooda u dhaxeeya,kaas oo ka faa’idi doonaan.
Gaba-gabadii wasiirka wasaarada boosaha iyo is gaadhsiinta Somaliland ayaa furay mashruucan Bidhka ah ee la doonayo in xidhiidh loogu sameeyo wasaaradaha dawladaha taas oo maanta lagu daah furayay furitaankiisa cidii qaadan lahayd Mashruucan oo Shirkadaha bixiyay adeega Internayd layskugu yeedhay.
Mudane Maxamuus Sheekh Cabdilaahi Cige wasiirka boosaha ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in sida ugu wanaagsan adeegan Bidka ah layskaga xil saaro,waxaana uu wasiirku la dardaarmay shirkadaha bixiyay intenaydka oo maanta layskugu keenay Hoolka Wasaarada taas oo shirkad waliba loo bandhigayay adeega looga baahan yahay.
“Mashruucan bidhka ahi waa mid aad u wanaagsan mid sahlaya in ay xidhiidh toos ah yeeshaan wasaaradaha dawladu,waxaanan ku dadaalaynaa inaanu markasta isku dayno sidii mashruucaasi u hir gali lahaa oo faa’ido inoogu filan.
Mashruucan bidhka ah ayaa wasaarada boosahu ku guulaystay sidii ay u hirgalin lahayd,waxaan ay tani ka turjumaysaa dadaalka dheer ee ay ugu jirto xidhiidhka wasaaradaha dawladu iyo kuwa caalamkaba,waxaana mashruucan keenay wasaarada inta uu xilka hayay wasiirka cusub ee boosaha oo ku sunta dadaal iyo dhiiri galinta shaqaalaha wasaaradiisa oo durba inta uu xilka hayay ay soo iftiimeen mashruucyo bad